Ceni: “Tsy azo sokafana intsony ny lisi-pifidianana” | NewsMada
Ceni: “Tsy azo sokafana intsony ny lisi-pifidianana”
Miroso ny fanatanterahana ny fifidianana. Amin’izany, mbola misy ny mitaky ny fanitsiana ny lisitry ny mpifidy. “Tsy azo sokafana intsony ny lisi-pifidianana”, hoy ny Ceni.
“Amin’izao fotoana izao, ny amin’ny fanavaozana manokana ny lisitry ny mpifidy na ny fanokafana izany indray mandeha mialoha ny fifidianana hatrehintsika: zavatra tsy azo atao intsony. Sarotra ny hanatanterahana azy na eo amin’ny lafiny teknika, na lafiny vola, na lafiny fanarahan-dalàna.”
Izay ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, momba ny lisitry ny mpifidy izay isian’ny fitakiana ny amin’ny tokony hanavaozana na fanokafana izany indray mialoha ny fifidianana amin’ny 7 novambra.
Tsy ho azo atao intsony izay fanavaozana lisi-pifidianana izay eo amin’ny lafiny teknika. Tsy mamela antsika hanao izany intsony ny fotoana ananana. Efa vita fanontana avokoa ny lisi-pifidianana rehetra amin’izao fotoana izao. Efa tafapetraka eny anivon’ny fokontany sy ny biraom-pifidianana izany. Efa vita fanontana koa ny kara-pifidianana rehetra, ary efa manomboka ny fizarana izany amin’ny toerana maro manerana an’i Madagasikara, araka ny fanazavany.
Noho izany, tsy azo eritreretina intsony eo amin’ny lafiny teknika ny mbola hahazoana manokatra ny lisi-pifidianana. Avy eo, raha hatao izany: hamarana ny lisi-pifidianana, izay vao hanao ny fanontana sy handefa azy any amin’ny biraom-pifidianana ary hanontana ny kara-pifidianana.
Tsy misy ny vola, mila hajaina ny lalàna
“Tsy azo atao koa izay fanavaozana ny lisi-pifidianana izay eo amin’ny lafiny vola”, hoy izy. Efa napetraka amina asa tsirairay avy ny vola nomen’ny fitondram-panjakana. Tsy misy intsony ny vola natokana hanaovana izany fanavaozana manokana ny lisi-pifidianana izany.
Eo amin’ny lafiny lalàna, izay lehibe indrindra, na ho azo atao aza ny lafiny teknika sy ny lafiny vola ary ny lafiny fotoana: fanjakana tan-dalàna isika ary miomana hanatontosa fifidianana manara-dalàna, milaza ny lalàna fa nakatona tanteraka ny lisi-pifidianana, ny 15 mey. Io lisi-pifidianana io no hany azo hampiasaina amin’ny fifidianana rehetra mandra-pahatonga ny 15 mey 2019.
Eo hatrany ny tsy fanarahan-dalàna
Raha ny fijerin’ny mpandinika sasany azy, anisan’ny antony mahatonga ny fitakiana etsy sy eroa amin’izao ankatoky ny fifidianana izao ny fahazaran-dratsy amin’ny tsy fanajan-dalàna? Na tsy fahafantarana izany… Heverina ho ambonin-javatra sy mavesa-danja hatrany ny antony politika, azo anitsakitsahina sy anovana eny am-pandehanana ny lalàna.
Na izany aza, misy koa ny tena tsy niomana mialoha sy nijery lavitra amin’ny fiatrehana ny fifidianana. Anisan’ny voalohany sy lehibe takina amin’izany, ohatra, ny fahalalana sy famolahana ny lalàna manankery. Nisaritaka tao anatina savorovoro politika rahateo ny nandaniana ny lalàm-pifidianana. Izay no hararaotina?
Tsy ny tsirairay ve no tokony hanao izay mifanaraka amin’ny lalàna fa tsy ny lalàna no hahitsy hifanaraka amin’izay ataon’ny tena? Rehefa hita fa tsy mety ny lalàna, fa izay aloha no eo: efa tokony ho niady izay hanitsiana izany tany am-boalohany, raha tena niomana mialoha sy nijery lavitra fa hiatrika fifidianana. Raha tsy izany, tsy mirotsaka…